Golden Plain Livelihood Development Services Co-operative Limited | ကျွနုပ်တို့ အကြောင်း
ဤအသင်းသည် ရှေးဦးစွာ ရွှေရောင်လွင်ပြင်စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်သမဝါယမအသင်းလီမိတက်၊ အမြတ်-အစွန်းအတွက်မ ရည်ရွယ်သောအသင်းအဖြစ် ၁၉၉၂ မြန်မာသမဝါယမအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအောက်၌ ၁၂၊ သြဂုတ်လ ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန် မြို့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၇၊ သြဂုတ်လ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မူ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရွှေရောင်လွင်ပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု သမဝါယမအသင်း လီမိတက်အဖြစ် တရားဝင်အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ရွှေရောင်လွင်ပြင်သည် "Potential Applicant Data Online Registration" (PADOR) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး မှတ်ပုံ တင်အမှတ်မှာ Euro Aid ID.MM – 2011– BS – ၀၄၀၈၇၀၄၁၅၂ ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
အသင်း၏ကူညီထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေသ ရှိလူဦးရေအများဆုံးအတွက် မျှော်မှန်းပါသည်။
လက်ရှိတွင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ၃၅ ဦးရှိပြီး၊ ၁၈ ဦးမှာ စီမံကိန်းကာလတွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သ သည်။ ထို့အပြင် စိုက်ပိုျးရေးတက္ကသိုလ်၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ၅ ဦးသည် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဤအသင်းတွင်ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ နှစ်ပိုင်းရှိပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သည့်အပိုင်းဟုခွဲခြားထားပါသည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် အဓိကအဖြစ် သီးနံှစိုက်ပိုျးရေး ပညာရှင်နှင့်မွေးမြူ/ဆေးကုပညာရှင်များပါဝင်သည်။ ဤဝန်ထမ်းများမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ အုပ်ခုျပ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို တာဝန်ယူသည်။
ကျေးလက်နေ ပြည်သူများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း( စိုက်ပိုျးရေး၊မွေးမြူရေး) ၊ အသေးစားလုပ်ငန်း ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း။
ကျေးလက်ဒေသ ဖွိ့ဖြိုးရေး နယ်ပယ်တွင် အတိုင်ပင်ခံများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ကျေးလက်ဒေသ အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
LIFT,EU,UNDP,JICA တို့၏ ရံပုံငွေဖြင့် စီမံကိန်းများ ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
Association for Aid and Relief (AAR)-Japan, Acted, Action Aids, Country Agency for Development(CAD), Myanmar, Consortium of Dutch Networking (CDN),Capacity Building of Food Security, CDA, CESVI, DCA, Department For International Development(DFID), ECCDI, ECLOF, EOJ-GGA, FNF, FSWG, German Agro Action, GRET( Geoupe de Recherché et d’Echanges Technologiques), Help Age International( HAI), Japan International Cooperation (JICA), Karan Baptist Convention(KBC), Korea Oversea International Cooperation Agency( KOICA), Myanmar Business Enterprise(MBE), Men’s Association(Myanmar Christian Council , NGO Gender Group, Norwegian People Aid(NPA), PMA, Relief International(RI), Save the Children, Triangle GH, UNDP, UNODC, World Concern, World Vision
Detail lists of Partners, Projects, Activities, Trainings and Time are here with attached (Annex-1)
ကျေးလက်နေ ပြည်သူများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း( စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး)
မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒီရေတောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ (လပွတ္တာ) (JICA)
အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြည်လည်ထူထောင်ရေးစီမံချက် (ကလော၊ ပင်းတယ၊ ညောင်ရွှေ) (UNDP)
ရွှေရောင်လွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းသည် ၂၀၁၁ မှ၂၀၁၃ခုနှစ်အထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မလှိုင်နှင့်အရာ တော်မြို့နယ်များရှိ ရည်ရွယ်ထားသောကျေးရွာ ၃၀ တွင် စီမံကိန်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသရှိ ပြည်သူ များ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု တိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်း များပေးခဲ့ပါသည်။
လိပ်စာ – No.(783-A) 2nd Floor, Kyaw Thu 21st Street,9Quarter, South OkKaLaPa Township, Yangon, Myanmar.
ဖုန်း : 09-8633970, 09-965150465, 09-421173124
အီးမေလ်း – admin@goldenplain.org